SAWIRRO: Maxaa kasoo baxay kulankii Qabanqaabadda u dambeysa ee doorashada? – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
SAWIRRO: Maxaa kasoo baxay kulankii Qabanqaabadda u dambeysa ee doorashada?
May 14, 2022 Xuseen 2
Guddoonka labada Aqal ee Baarlamaanka ayaa waxay maanta kulan ku saabsan amniga doorashada la yeesheen gudigga qabanqaabada doorashada madaxweynaha JFS iyo sarkiisha sare ee howlgalka ATMIS.
Shirka waxaa ka soo qeyb galay ku-xigeenka Ergayga Gaarka ah ee Midowga Africa marwo Fiona Lortan, Taliyaha Guud ee (sector1) Maj. Gen William Shume, Taliyaha Guud ee Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Jen. Cabdi Xasan Maxamed Xijaar iyo saraakiil sare oo ka tirsan howlgalka ATMIS iyo Booliska Soomaaliyeed
Wax kale oo aan idhaahdo garan aan maayo, aan ka ahayn in meel lagu jabay uu sawirkani muujinayo!!!
Waxa aan ka wadaa, nimankaa booliiska jamhuuriyadda Soomaaliyeed ah, ee dhalinyarada u badani, maku faraxsanyihiin “sankadhuudhigan” ay horfadhiyaan?! Nimankaa gafuurka waaweyn, ee ay iska soo hormariyeen nimankii “caddaa”, baa jamhuuriyaddii ku habsaday halbawlayaasheedii, qaarna gobolo dhan bayba qaateen. Yaa ruwaayadda loo dhigayaa marka?
Taa waxaaba ka daran, qaar madax sheeganaya baaba lahaa waxa aan rabnaa “ATMIS” ee marrabno ciidamada jamhuuriyadda!!! Yaase fahmaya sababta dhabta ah ee ka danbaysa in magac bixintii AMISOM lagu beddelo ATMIS? Anaa idiin sheegaya, shaadhkii baa loo beddelay si “haysashadii loo dardargeliyo”. Waxaa la akhrinayo ee la leeyahay waxa ay ka amarqaadanayaan ciidamada jamhuuriyadda, waxba kama jiraan. Waa kadda iyo koow & qabsasho cusub. Dadkaa la rabaa in la “indha sarcaadiyo”.
Gunaanadkii, sawir fiicani meesha kama muuqdo haddii kii hore soo laabto & haddii mid cusubi yimaaddoba. Haddaa waxaa lagu leeyahay mid waliba waxa uu ku olalaynayaa in xildhibaanada doorta uu ku dari-doono “golihiisa wasiirada”! Marka, aaway baarlamaankii? Saw marka ma noqonayso “madax kanool lagu beddelay madax kanool”? Ninkii aragga la’aa waxa uu yidhi, “wax uun baan dhawri.”
Hillaac faalladiisan kore waxay lamid tahay mid uu dhakhtar gaamuray tilmaan waafi ah ka bixinayo astaamaha ka muuqda bukaan sariirta saaran oo uu dul qotomo. Intabadanna, afkaarta bogaggan lagadhiibto astaamaha jirroolaha uun bay kasheekeeyaan.
Waxaase mudnaanta leh in lagafaalloodo oo la isla falanqeeyo cudurka astaamahaas curiyay waxa uu yahay, si markaasi dabiibka kuhabboon loo garto oo lagu dhayo oo looguna dhaayo – waayo bukaankani (Soomaali) in ladhayo iyo in loodhaayo labadaba wuu u baahanyahay maanta.
Cudurka astaamahan curiyay ee bukaankanna sariirta kuhubsaday muxuu yahay isagu?